Briteen talaallii COVID-19 kaampaaniiwwan lama waliin oomishaniiif hayyama kennite - NuuralHudaa
Briteen talaallii COVID-19 kaampaaniiwwan lama waliin oomishaniiif hayyama kennite
Briteen talaallii dhibee Koroonaa namarraa ittisu, kan kaampaaniiwwan Pfizer fi BioNtech jedhaman waliin oomishan, akka hojii irra oolu hayyama kennuun biyya jalqabaa taate.
Haaluma kanaan mootummaan Briteen talaallii kana lammiilee keennuuf qophii akka xumureefi, torbee dhuftu hojjattoota fayyaatiif dursa kennuun talaallichi guutuu biyyattii keessatti kan kennamu tahuu ibsame.
Mootummaan Briteen ibsa baaseen, talaalliin kun weerara vaayirasii koroonaa guutuu addunyaa gaaga’ama hamaa keessa galche ittisuudhaaf abdii guddaa tahuu hime.
Haaluma walfakkaatuun Ameerikaa fi Gamtaa Awrooppaa dabalatee biyyoonni heddu talaallii dhibee koroonaa kennuuf qophii xumuruu ibsaa jiran.
Talaalliiwwan hanga ammaatti oomishaman jidduu talaalliin Pfizer fi BioNtech waliin oomishan kun, yalii sadarkaa sadihiitiin 94% ol bu’a qabeessa tahuu eega ibsamee booda fudhatama guddaa argataa jira.
BioNtech dhabbaata qorannoo fayyaa muslimoota Jarman kanneen hidda dhalata Turkiyaa qaban lamaan kan hundeeffame yoo tahu, saayintistoonni haadhaa warraa fi abbaa warraa tahan lamaan kun talaallii kana argachuun dinqisiifatamaa jiran.
July 31, 2021 sa;aa 7:35 pm Update tahe